Igumbi lokulala eli-2 langoku kuMbindi weOxford
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguSyed Ejazul
Igumbi lokulala eli-2 langoku liqhayisa ngegadi yabucala, indawo yokupaka ezitalatweni, i-Smart TV, ikhitshi elitsha kraca kunye nazo zonke zikwiNDAWO EFANELEKILEYO! Ukuhamba nje kwemizuzu engama-20 ukusuka kumbindi wedolophu yaseOxford apho unokuphonononga amabala ekholeji adumileyo kunye ne-Westgate complex, ebonelela ngeempawu zehlabathi, iibhari zophahla eziphucukileyo, indawo yokutyela, icinema nokunye okuninzi.
IHinksey Park kukuhamba imizuzu eli-10 kwaye yindawo entle enemithi enezilwanyana zasendle, iindlela zokuhamba, ichibi kunye nezixhobo zemidlalo kubandakanya ichibi langaphandle.
Le ndawo ilawulwa ngumncedisi oqeqeshiweyo wakwa-Airbnb.
Iinkonzo zibandakanya: Ukucocwa kobuNgcali / ilinen yoMgangatho weHotele / iitawuli eziNtsha / Ukuzijonga ngokulula / Inkxaso yeeNdwendwe ezingama-247
UKULALA & UKUHLAZIYA
Igumbi lokulala 1: Ibhedi ephindwe kabini / kuMgangatho wokuqala
Igumbi lokulala 2: Ibhedi ephindwe kabini / kuMgangatho wokuqala
*Kunikiwe ibhedi kunye nelinen esemgangathweni yehotele*
Igumbi lokuhlambela: Ibhafu, Intloko yeshawari, iWC & Basin / kuMgangatho wokuqala
WC: WC & Basin / uMgangatho ophantsi
*Iitawuli ezitsha kunye nezinto zangasese zokuhamba zinikezelwe *
Iyafumaneka ukuze uyisebenzise:
- Iwasha + Iimpahla zikaloliwe zokomisa
- Intsimbi + Ibhodi yokuAyina
UKUTYA & UKUXILA
Emva kosuku olude lokubona, buyela umva kwenye yeesofa ZOKUHLALA ezitofotofo kwaye ubukele umboniso owuthandayo kwi-Smart TV kunye nee-apps ezifunwayo, iziteshi zeFreeview eziqhelekileyo nazo ziyafumaneka.
*I-WiFi isebenza kuyo yonke ipropathi*
IKITCHEN exhotyisiweyo, kuquka:
-Iketile, iToaster, iMicrowave
-I-Oven yoMbane, iHob yoMbane
+ zonke iimbiza, iipani kunye nempahla yokupheka isaqhwithi!
Nandipha ukutya kwakho okanye wenze isampulu yento oyithathayo yasekuhlaleni kwitafile yokutyela.
Nceda uthathe ithuba lokugcwala kwelanga, igadi yabucala yangasemva enefenitshala yegadi ebonelelweyo.
NGAPHANDLE & MALUNGA
EKUHLALENI uya kufumana yonke into oyifunayo!
Ukuhamba ngomzuzu omnye ukuya kwivenkile enkulu yasekhaya, Tesco
Imizuzu eli-10 ukuhamba ukuya eHinksey Park
Uninzi lweendawo zokutyela ezintle ezikufutshane kubandakanya iDuke yaseMonmouth, iWhite House kunye neFolly-amava amnandi okutyela ngasemlanjeni. Izindululo ezongezelelekileyo kunye nolwazi lwasekhaya lunokufumaneka kwicandelo 'leNdawo'.
Imbali ye-OXFORD CITY CENTRE yindawo ebukekayo yemizuzu engama-20 yokuhamba ecaleni kwendlela yomlambo okanye uhambo olulula lwebhasi ukuya kude - indawo yokumisa ibhasi emelene nepropathi. Apho uya kufumana amabala ekholeji adumileyo. Izindululo zibandakanya: IKholeji yeChristian Church: iboniswe kwiifilimu zikaHarry Potter / Imyuziyam yaseAshmolean: Imyuziyam yokuqala yeyunivesithi yehlabathi kunye necafe yophahla / Ikhamera yeRadcliffe kunye neCawa yaseSt. izinto ezizigidi / I-Westgate Complex: iibrendi zehlabathi, icinema kunye nophahla lweendawo zokutyela kunye nemivalo / Ukubetha: Umsebenzi odumileyo wokuzonwabisa obandakanya isikhephe kunye nepali kwimilambo yaseCherwell & Isis.
I-COWLEY CENTRE yimizuzu emi-5 kuphela yokuqhuba okanye ukuhamba ngebhasi ngomzuzu we-10 (akukho 16 ibhasi) kwaye izaliswe ziivenkile zokuthengisa ezibandakanya i-JD Sports NewLook kunye ne-Asda Living. Apho uya kufumana abalungisi beenwele/ abachebi, iindawo zokuzivocavoca, iivenkile ezinkulu, iikhemesti, iibhanki, ii-ATM kunye nayo yonke enye into onokuyidinga ngexesha lokuhlala kwakho.
I-COWLEY ROAD kukuhamba ngemizuzu engama-20 kwaye yaziwa ngoluhlu lwayo lwe-eclectic lweendawo zokutyela, iindawo zomculo kwaye ine-cinema ezimeleyo, I-Ultimate Picture Palace.
NGENXA YOKUPAKA IZITATO ZAMAHHALA ezifumanekayo ungaqhuba ngokulula naphi na apho ufuna ukuya khona. Ukusuka kumbindi wesixeko ungabamba uloliwe osuka kwiSikhululo saseOxford okanye i24/7 yebhasi eseLondon (OxfordTube) kunye nezikhululo zeenqwelo moya ezisuka kwisikhululo sebhasi saseGloucester Green.
** I-20% isaphulelo kwimenyu 'Yokutya' e-Alchemist, eWestgate, eOxford, kuzo zonke iindwendwe **
Unikezelo alusebenzi ngeMigqibelo - Unikezelo alusebenzi nge-25th Novemba - 25th Disemba - Zonke ezinye iimenyu eziquka i-'Bottomless Brunch', 'Iziselo' kunye 'neKrisimesi' azibandakanywanga.
4.41 ·Izimvo eziyi-22
Umzuzu omnye uhambe uye eTesco Express kwikona yendlela iAbingdon kunye neWeirs Lane. Umbindi wedolophu kunye nendawo yokuthenga entsha yaseWestgate kukuhamba imizuzu engama-25 ecaleni kwendlela yomlambo. Indawo yokuthenga yeTempile Cowley kunye nepaki yokuthengisa yimizuzu emi-5 yokuqhuba okanye ukuhamba ngebhasi imizuzu eli-10 (no. 16). Apho uya kufumana ivenkile enkulu yaseSainbury kunye neevenkile ezinkulu ezincinci kubandakanya iCo-op. Apho uya kufumana i-FeelFit kunye ne-Pure Gym (ukufikelela kwiiyure ezingama-24), i-Post Office, iibhanki, umatshini wemali / i-ATM, iibhutsi kunye nekhemesti ye-Superdrug, abachebi / abalungisi beenwele, i-salon yokushuka, kunye neevenkile ezithengisa i-JD Sports, TK Maxx, NewLook, I-Asda Living, iPoundland kunye nokunye okuninzi.
IHinksey Park kukuhamba imizuzu eli-10 kwaye yindawo enamahlathi anezilwanyana zasendle kunye neendlela zokuhamba, ichibi kunye nezixhobo zemidlalo kubandakanya ichibi langaphandle.
IINDAWO ZOKUTYA & UKUSELA
I-Duke ye-Monmouth Pub (i-5 min ukuhamba) - i-pub eqhelekileyo ekhonza ukutya.
Indawo yokutyela ebubudenge (imizuzu eyi-18 yokuhamba)-icala lomlambo lokutyela okulungileyo.
Ivenkile yeentlanzi zaseMeditera kunye neChips (imizuzu emi-4 yokuhamba) - ukutya okuya kuthatha.
Ungaphuma uye kumbindi wesixeko saseOxford kwiindawo zokutyela ezinkulu kunye nemivalo, ikakhulu phezu kwesakhiwo saseWestgate okanye uye kwi-eclectic Cowley Road (uhambo lwemizuzu engama-20) ekwabonelela ngokhetho olukhulu lweendawo zokutyela, imivalo kunye neevenkile zekofu. I-Chester Arms yimizuzu eli-15 yokuhamba kwaye inikezela ngesitya senyama esimnandi kunye nesidlo sangokuhlwa esiqhotsiweyo.
Umbuki zindwendwe ngu- Syed Ejazul
Mna kunye neqela lam lolawulo lwezakhiwo siza kufumaneka 24/7 ngo-Airbnb, nge-imeyile, okanye ngomnxeba ukuze sikunike naluphi na uncedo onokulufuna.
Idiphozithi Yokhuseleko - ukuba wenza umonakalo kwikhaya, usenokubhataliswa ukuya kutsho kwi-R4114